New mpampiasa dia miezaka Kratom isan'andro rehefa avy nandre momba ny traikefa mahomby izany zavamaniry avy amin'ny namana na ny tantara nalefa an-tserasera. Ary raha tsy mbola manapa-kevitra ny hitsambikina ka hanome Kratom ny hanandrana, dia zava-dehibe ny fantatrao izay hitranga avy amin'izany Botanical. Kratom vokany dia afaka toa mifanohitra ny fantatrareo mpampiasa: izany fototra dia afaka hampitombo hery sy tanjaka nefa koa manampy ny tony sy miala sasatra anao. Ny divergence in vokany dia miankina amin'ny hoe hatraiza ny raokandro ity ampiasaina avy hatrany, ny samy hafa sorisory ao levona ary koa ny mpikaroka manokana. Raha toa ianao ka mampiasa vola kely, ianao dia hahatsapa bebe kokoa hifoha ara-tsaina, mainka traikefa manokana sy ny fanentanana, ka mahita ny antony manosika mitombo be. Amin'ny fatrany lehibe kokoa, ny vokatry ny Kratom afaka mitarika ho amin'ny fihetseham-po ny hafaliana, fampihenana in fanahiana, sedative-toy ny vokatra ary koa toy ny mampahatsiaro anareo ho eo an-pialan-tsasatra toe-tsaina. Ao amin'ny manaraka mpitarika ny ny tsara ary koa ny vokatry ny ratsy Kratom, dia hijery ny fomba ahitra ity heriny ny vatanao ary koa ny toe-tsaina.
1. Stimulatory: In kely vola, Kratom dia manome hery toy ny kapoaky ny dite na kafe caffeinated. Ny vokatra dia tsy angovo correlated amin'ny fisalasalana na mitombo ao am-ponao ny tahan'ny. Tatitra ny ankamaroan'ny hanoratra azy ho toy ny atidohany hery izay te-tsainao no mazava kokoa, ianao mahatsapa fifantohana lalina, ary manana fahatsapana matanjaka voalanjalanja sy ny heriny.
2. toe-po Boosting: Mpampiasa indrindra milaza fa Kratom tena mampahery ny toe-po sy ny fandroson'ny ara-pahalalana fanjakana. Fiantraikany iray hafa io zavamaniry dia mety hahatonga anao hahatsapa ny fahatsapana ny lalina afa-po sy tsara-panahy. Indray dosing isan'andro avy dia afaka hanakana ratsy eritreritra sy hampahatsiaro anareo amin'ny toe-tsaina feno fanantenana izay afaka mahita na inona na inona azo atao M. Amin'ny fanarahana lehibe kokoa, Kratom vovoka dia afaka hiteraka fihetseham-po tena fahasambarana. Izany no azo inoana fa ny vokatry ny mitragynine alkaloid izay efa hita ny anti-depressant hanehoana toetra tsara.
3. manatsara fitanana: Iray hafa vokatry ny Kratom dia toy ny fifantohana mafy Booster na nootropic. Ny fotsy sy maitso sorisory ao amin'ny Kratom no tena mahomby ho an'ny atidoha counteracting zavona, ary manampy anao hifantoka tsaina rehetra ny hery eo amin'ny fotoana ankehitriny. Mpianatra hoe mahatonga azy ireo hahatsapa bebe kokoa hihaino rehefa mipetraka ao an-dakilasy sy ny lehilahy no niteny izany dia manampy azy ireo hihaino kokoa, rehefa mihaino ny vadiny. Misy hevitra avy amin'ny mpampiasa, izay milaza fa nihatsara ny hametraka / ADHD soritr'aretina, mahatonga eritreritra mazava kokoa, ary mandatsaka ny mora kokoa ny mifantoka rehefa mianatra, na manao asa sarotra ara-tsaina.
4. mahery miala voly: Rehefa mampiasa fatrany lehibe kokoa ny Kratom ravina na capsules, dia mahatonga bebe kokoa ny anxiolytic sy sedative vokany. Raha manohana tsara fihetseham-po, dia mety hampitony anao koa izy ary hanampy anao hanaisotra ny sainao ny saina hevitra. Izany ihany koa ny mampihena ny fanampin fihetseham-po dia afaka ny tebiteby, ary hanampy anao hamoaka ara-batana na ara-tsaina sy ny olana.
5. Analgesic (Pain Fampihenana): Mitragyna speciosa dia nanolo-kevitra mba hahitana vokatra hafa ho henjana levitra fanaintainana mpamono olona. Izy io dia mampiasa mu-opioid mpandray zava-mahadomelina toy ny morphine mba hanamaivanana vonjimaika na mitaiza fanaintainana. Voalaza hiasa ho an'ny toe-piainana toy ny malalaka-miainga toy ny aretin'andoha na migraines, arthritic fanaintainana, Vascular fanaintainana, hozatra fanaintainana ary koa na dia mitaiza fanaintainana izay mety ho mahatohitra ny zava-mahadomelina hafa. Ny vokatry ny Kratom koa Heverina ho azo antoka kokoa, ary tsy be mampiankin-doha noho ny sasany amin'ireo fanafody matanjaka kokoa amin'izao fotoana izao ny voalazan 'ny dokotera.
6. Torimaso kokoa: Tarehy iray hafa vokatry ny Kratom dia fa iray amin'ireo tsara indrindra anana voajanahary noho ny fanatsarana matory tsara. Tsy afaka manompo ny hanidy eny an-tsainao alohan'ny hatoriana, ary afaka mametraka anareo ho eo an-pialan-tsasatra fanjakana izay mahatonga mora kokoa ny hatory. Mpanome hevitra sasany milaza fa miaina kokoa ny nofy rehefa mampiasa Kratom ho toy ny torimaso izy ireo fanampiana ary mirona amin'ny hamoha fahatsapana velombelona kokoa sy vonona ny handeha ny ampitso maraina.
7. Heightens Sociability: Ny hafa ateraky ny fampiasana Kratom dia fa afaka manampy anao kokoa ny ara-tsosialy sy hanafoana ny fanahiana, rehefa olon-tsy fantatra na ny fivoriana miresaka vondron'olona lehibe. Mety hampitombo ny hifaly mihitsy aza ny fifandraisana ara-tsosialy mba kokoa voatery mivoaka sy ara-tsosialy isan-karazany handray anjara amin'ny hetsika.
8. Sexual Enhancer: Misy be dia be ny tatitra avy amin'ny olona mandray Kratom voajanahary koa omen'ny sy ny firaisana ara-nofo toy ny aphrodisiacs fampisehoana enhancers. Izany dia mety mampitombo arousal ethnobotanical fihetseham ary hanampy anao intsony haharitra mandritra ny hetsika. Toa ny miasa ho toy ny firaisana ara-nofo excitant na ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Indraindray naka tahaka ny kely toy ny 1 Bali Kratom gram ny vovoka dia afaka hampitombo ny libido ho araka izay 12 ora.
9. Eases Opiate Ny famoizana: Ity vokatra Kratom tsy mihatra amin'ny maro ny mpamaky, saingy izany no iray amin'ireo ampiasana mitombo haingana noho izany voajanahary iombonana. Ho an'ireo izay efa andevozin'ny opiates na iza te-nanapaka indray ny opiate fahazarana tsy miaina fanesorana, Kratom manome fanampiana lehibe. Voalaza mba hanafina ny vokatry ny fialana amin'ny opiates sy ny zava-mahadomelina tsy ara-dalàna hafa izay matetika mampiavaka ny hatsembohana tafahoatra, mandoa, hozatra fanaintainana, fahitan-tory, ny fanahiana sy ny aretim-pivalanana. Mampiasa Kratom ravina, misy afaka mifehy ny fiankinany amin'ny zava-mahadomelina ireo mandra tanteraka ny rafitra detoxed. Koa satria Kratom Tsy doha, dia afaka mampiasa azy io dia tsy misy intsony koa mety ho fialana.
10. Raha Mahatonga ny Fahasalamana: Kratom efa nampiasaina nandritra ny taonjato maro avy any Azia Atsimo Atsinanana kolontsaina ho toy ny fanafody anana. Ireo mponina dia fantatra isan-karazany ara-pahasalamana ankapobeny tombontsoa mifandray amin'ny Kratom. Izany dia mahery vaika manohitra ny oxidant izay hita mihitsy aza mba hampihenana ny neuron fahasimbana taorian'ny Tapaka lalan-dra. Mety hampidina tosidra Ary voajanahary ahitana ny alkaloid fampiasa amin'ny anti-hypertensive fanafody. Koa misy Catechin izay voalaza manahaka insuline sy hifehy ra haavon'ny siramamy ho an'ny diabetics. Hafa vokatry ny Kratom ahitana anti-niparitaka be sy ny anti-bakteria fananana izay afaka hampitombo ny hery fanefitra. Farany, ny sasany nahita izany mba hampiroboroboana sy manatsara levitra athleticism amin'ny fampitomboana angovo metabolism.
Maro ireo tsara Kratom vokatry, fa iray be mampiasa azy io tamin'ny lalana marina mba hisorohana ny vokany. Izany fototra dia tsy heverina ho mampidi-doza ary misy ambany lehibe mety vokany hafa mampiankin-doha na hery anaty. Tsy toy izay ny haino aman-jery tatitra milaza, tsy misy olona ao amin'ny USA hatramin'izay maty tsy hampiasa Kratom, ary azo inoana fa tsy ho voka lehibe mankamin'ny vokany raha tsy mandray ny levitra 10-20x avo noho ny soso-kevitra vola. Na izany aza, misy vokany fahalemem mba ho fantatry ny. Tsy mety hiteraka faharendremana, havizanana, fitohanana, maloiloy, ary ny vavoniny mahazo aina rehefa manomboka voalohany avy. Misy karazany sy ny karazam-Kratom dia azo inoana kokoa ny hahatonga ireo vokatry ary mety mila hanandrana kely mba hahitana izay tsara iray ho anao.
Efa maro ny tatitra momba ny "Kratom Hangover" rehefa avy nandray izany fananana ny ampitso maraina. Izany no maneho ny maha-aretin'andoha, mora tezitra, maloiloy, tebiteby na hafa mifandraika vokatry. Raha mampiasa tsy tapaka, misy afaka hanana ny fandeferana ary hahatsapa ny faniriana hanohy ny hitondra bebe kokoa mba hahazoana ny vokatra mitovy. Aza mihoatra ny soso-kevitra vola toy izany dia afaka mamorona ny mety ho fanararaotana. Na dia tsy Kratom doha, dia mety ho fahazarana namorona ny lava ampy ny fotoana. Tokony hifehy ny fampiasana raokandro ity mba hiarovana hanohitra ireo mety ho loza sy manamaivana vokany.
Buy fiankinan-doha ianao hoe fiankinan-doha misy fahasamihafana fiankinan-doha sy ny fahazarana dia ankapobeny ihany nefa ny fiankinan-doha sy ny fiankinan-doha dia tsy Google izany raha tsy mino ahy
Marina, olona maro be (diso) tsy manavaka ho andevozin'ny zavatra vs ho ara-batana, satria miankina amin'ny zavatra tena matetika na dia ankehitriny rehefa misy olona manana “zava-mahadomelina olana.” Fiankinan-doha kokoa ny fihetsika olana, fiankinan-doha ara-batana no. Fiankinan-doha-po dia mila ny zava-mahadomelina na ny fahazarana izay efa miorina, fiankinan-doha rehefa tonga zava-mahadomelina efa ela fa ny tenanareo dia lasa zatra ny vokatry ny zava-mahadomelina, tampoka toy izany fitsaharana ny hoe zava-mahadomelina antony fialana soritr'aretina. Raha kely indrindra amin'ny opiates, mieritreritra aho dia mety ho mahasoa kratom ho an'ny toe-javatra, na dia mahomby foana amin'ny fanalefahana fialana soritr'aretina. Tsy mihena ny soritr'aretina amin'ny herôinina fanesorana efa ho tanteraka, ary efa nanampy ny maro tamin'ny namako Detox izany. Be isika rehetra amin'izao fotoana izao ary sambatra kokoa isika vola bebe kokoa koa ;)
To miankina amin'ny zavatra isan'andro ny Fahazaran-dratsy… raha miankina amin'ny izany ara-batana. ….salama efa andevozin'ny!!!
Tsy maintsy ho sarotra ny olo-miaina tamin'iny tampon'ny tendrombohitra.
ho zava-dehibe Dude? ianao no bash olona noho izy mirehareha ny hiala ny tena zava-mahadomelina fahazarana sarotra handrava? Efa nampidirany herôinina, na nahita izany?? helo, Efa nandao ny culdesac aza ao amin'ny tanàna manodidina yuppie? Jesoa Kristy. Antenaiko, amin'ny ambaratonga tsy fahalalana, ianareo manan-janaka na oviana na oviana, satria ny zavatra fahazaran-dratsy dia areti-mifindra. Tsy mino ny aretina satria niala ny herôinina / pilina / na zava-mahadomelina aho, afaka hahazo ny tanana fahazarana tanteraka raha tsy misy ny zavatra tsy nihinan-kanina (Tiako roa labiera rehefa miasa ny 16 ora ny andro, 6 isan-kerinandro). aho nandritra ny mampiditra herôinina 7 taona – ary nanomboka Fony aho 16. aho tamin'ny farany no mijanona, kratom dia ny mpiara-. Tsy mbola nanao azy ho velona avy raha tsy noho kratom. Ihany koa aho 'clinically maty’ (na inona na inona ny dikan'izany) 3 fotoana samy hafa avy amin'ny H overdoses. kratom namonjy ny aiko. Faly aho no mbola tsy maintsy hiaina zava-tsarotra toy izany. satria lavitra koa aza hoe ny $$ tsy hanetry tena ampy ny handrava ny alalan '. Manantena aho fa ny fiainana voaaro mitoetra milamina, Andriamanitra mahalala fa mila izany.
Tokony ho fantatrao… ianao amin'ny tendrombohitra avo toy ny. Aza mitsara hotsaraina ianareo kely ny namana.
Mety ho lasa fahazarana fiankinan-doha. raha U hanorina fandeferana dia U dia mila kokoa bebe kokoa mandra-Tsy ampy U dia ho mila izany matetika kokoa izay lasa fanararaotana sy ny namako dia fiankinan-doha
Aho ny hividy ny lamin 'Kratom voalohany. Tsy te aho ny mahazo ambony. Ny hany faniriako mba haka azy teo amin'ny toerana voalohany dia ny manala ny opiates izay efa mampiasa ny lasa 10 taona noho ny mitaiza fanaintainana amin'ny fandidiana homamiadana sy ny spondylosis izay mitohy amin'ireo fanahiana. Ny olana izay efa nifanena dia ny tsy fahampian'ny fahalalana ny hoe aiza no haka azy ho toerana rehetra milaza ho ny tsara indrindra an-tserasera sy Kratom fa manana ny tsara indrindra amin'izao ireo sy ny vidin-javatra. Izany mamela ahy misy ny fahatahorana ny ho nandrovitra eny, ary amin'ny vokatra izay efa nandoa ho nefa tsy manao na inona na inona tsy ho ny fanaintainana, izay mafy. mba toroy hevitra, sa ianao koa mihambo ho manana ny tsara indrindra sa ianao fotsiny fanakianana ny toerana samy hafa. Miala tsiny fa tsy maintsy ho tapa-doha ho velona eto voafetra fidiram-bola, ary te-hiala opiates toy ny tsy misy hafa ka mila ny fanampiana sy ny fanaintainana olana. Misaotra be dia be ho an'ny rehetra torohevitra!
Zen mahazo Ultra Premium kratom tokana levitra fonosana…dia miasa, Mampanantena anao aho.
Zen Ultra Premium kratom tokana levitra fonosana lehibe, fa amin'ny 9 bucks ny Pop Tsy mino aho fa ny ankamaroan'ny olona dia afaka manam-bola fa. Way overpriced.
Afaka mitantara ny zava-misy. Hitako izany mpitari-dalana tena manampy, dia ahitana vaovao momba ny ankapobeny loharanom-baovao isan-karazany ary koa ny maso-lisitra ny vetting mpivarotra:
Manantena aho fa mampiseho ny OK, eto dia amin'ny lahatsoratra tsotra:
(Raha mampiseho toy roa andalana, rehetra dia tokony ho andalana iray monja.)
Manantena manampy, ary mirary soa.
Vao nanandrana ny Bali kratom androany noho ny fanaintainana tahaka ny endometriozy havr sy marina fampiasana suboxone intsony ho toy ny fanaintainana iray volana lasa izay mpamono, naka iray levitra amin'ny noana araka ny nanoro hevitra ary tena mahavariana. Toy ny taloha mpampiasa opiate manana fandeferana avo noho ny fanaintainana meds. Mipetraka any Denver ary amidy ara-dalàna ao amin'ny loha samy hafa vitsivitsy fivarotana, Nahazo ahy aho amin'ny Ity West. Izaho dia mandrisika mahazo ny karazana izay mihena ny fanahiana fa tsy ny karazana izay mampiroborobo ny angovo. Manantena manampy anao ny sasany.
Hey Sherri, Aho hahatakatra feno Heb momba ny olana. Ny mpivarotra avy any milaza ny manana amin'izao ireo sy ny kalitaon'ny vokatra dia samy hafa, fa Izaho no hanome anareo torohevitra vitsivitsy mifototra amin 'ny sasany ny zavatra niainana taloha. Fa ny mpivarotra, ny laharana voalohany dia toerana nipetrahan'ny an-tserasera Retailer ny anarana hoe Mood & Mind (www.moodandmind.com). Ankoatra Mitragyna speciosa (kratom), izy ireo mivarotra ny entana nahay hafa, fa amin'ny mety ho maneno toy ny manao aho ny varotra dity, Loha foana aho. Raha ny hevitro, ny hatsaran'ny kratom dia akaiky ny manam-paharoa eo amin'ny aterineto venders, ary ny tsy miovaova sy ny kalitaon'ny ireo sorisory maro miaraka vidin izay mihoatra noho ny ara-drariny ho azy ireo angamba ny safidy tsara indrindra. Ohatra, ny salam-bidy ho an'ny 4oz (112 grama, mitovitovy) ho 38-40 dolara. Fanampin'izany, ny mpanjifa dia ny faharoa tsy misy, ary ny lamina napetraka tamin'izy ireo santionany avy amin'ny fonosana ny vesatra hafa ny fifidianana.
Fanta-daza iray hafa mpivarotra ho Sage Fahendrena Botanicals (www.sagewisdombotanicals.com). Eo amin'ny ny hatsaran'ny ny vokatra (kratom indrindra, toy ny toerana tena manjohy ny Salvia Divinorum mpankafy), dia ny hevitro fa mipetraka eo an-tampon'ny mafy ny maridrefy eo amin'ny aterineto mpivarotra. Na dia izany aza satria ianao nilaza fa ny teti-bola no olana ho anao, Tsy afaka manoro izany ho toy ny mpivarotra ny vidin'entana hantsana (tsy amin'antony hantsana, raha manontany ahy).
Fahatelo, ary angamba ny tsara indrindra ho anao safidy omena ny toe-javatra manokana napetraka ny, dia safidy izay azo avy amin'ny loharanom-baovao iray toa tsy: amazon.com. Na misy mpivarotra peddling tambo isaina ny kratom alalan'ny Amazon, misy afa-tsy roa fa matoky: The Herbal Shop, ary Treekompany, Ary ny teo anelanelan'ny roa, I fitia Treekompany, toy ny vidin-javatra mora ka lalina noho ny THS, ary indray – raha ny hevitro – ny toetra sy ny fahasamihafana ny vokatra dia ambony. Na izany aza, HO nanoro hevitra fa raha mifidy misy Treekompany vokatra avy Amazon, Ataovy azo antoka tanteraka fa Treekompany no tena mpivarotra. Misy maromaro ny mpivarotra izay “mivarotra” Treekompany vokatra (toy ny DirectSale USA, ankoatry ny zavatra hafa), ary ny vokatra dia manome fa na tapaka amin'ny dite maitso, na amin'ny ankapobeny dia saika tsy azo heverina minia batch. Ataovy azo antoka fa ianao dia mariho ny faritra izay milaza “Sambo avy ka nivarotra tamin'ny X”. Raha X no afa-tsy Treekompany (na The Herbal Shop, tokony misafidy ny handeha hiaraka aminy), hijery ny lafiny ankavanana ambany “atao anaty harona” bokotra, ary mifidy ny mety mpivarotra avy any.
Rehefa nozohina, toe-po & Ao an-tsaina ary koa ny Treekompany dia angamba ny tsara indrindra ho an'ny mahazo tsara Bet kratom amin'ny antonony vidiny. Fantatro fa ity lahatsoratra ity dia tonga 5 volana tara, fa manantena aho fa efa aho fanampiana. Faly aho fa ianao opiate fandresena ny fiankinan-doha; foana ny asa lehibe, ankizivavy!
Jamison, Misaotra be dia be noho ny fanampiana. Mety ho 5 volana tara loatra ho azy fa tsy ho ahy! Betsaka ny tsara mombamomba ny mpivarotra.
Raha nandeha tamin'ny toe-po sy ny saina rehetra hitako dia kava kava aho no manao zavatra tsy mety?
Fantatro fa nandefa ity volana maromaro lasa izay, fa handeha aho mba hilaza aminareo izay nataoko ihany. ???? I nampiasa levitra fanaintainana mpamono olona nandritra ny folo taona, dia nandeha namaky mahatsiravina fanafoanana, Tsy mila azy ireo nandritra ny fito taona, Nila azy ireo nandritra ny roa taona indray. Tsy te-fanafoanana indray noho izany dia nanomboka nampiasa Kratom. Tsy hahatsapa mihitsy fialana amin'ny Kratom. Hitako fa raha hividy izany ao amin'ny Internet, izy rehetra mitovy. Misy lehibe iray distrutor ny Kratom sy ny ankamaroan'ny tranonkala hividy avy amin'izany Distributor. Aza mividy na inona na inona izay manana ny marika. Raha ireo maneho ny fonosana fa tsy ny Kratom, aza mividy, fa misy dikany izany. Koa, aza mividy amin'ny headshops, ry zareo koa misy dikany izany tanteraka. Ny tsara indrindra ho an'ny aretina fialana mena Thai. Manana ny ambony indrindra habetsaky ny tsara alkaloids. Raha tianao ny sasany tranonkala manokana sy ny dosages, mitifitra ahy ny mailaka amin'ny LadyKatharine123@yahoo.com
Izany no antitra Fantatro fa raha mbola mitady ny Chicago botanicals lehibe. Ry zareo ao amin'ny FB ary manana pejy web I.just hanafatra eny Mitadiava FB pejy :-)
Manantena aho fa miasa
Andramo onlinekratom.com kratom tsara izy ireo ary mafy amin'ny nanolotra izany aminareo!! Fa efa voatoriko avy amin'ny tranonkala hafa ary tsy misy ho toy ny azy ireo. Manantena aho dia manampy!
Izaho no naka kratom voalohany indrindra amin'izao fotoana izao ary nahatsapa fanamaivanana ny fihetseham-po ratsy sy mora tezitra.
I mampiasa Kratom tapaka. Manome soa be dia be ho ahy, ary Hitako ho lehibe sy tena azo antoka ny mampiasa. Hitako ny sasany fanampiny momba izay kratom no, Ahoana no haka azy, ary ny vokatry ny sorisory samihafa. Tsara tarehy i fanazavana.
Vao avy nividy ny sasany noho ny fanaintainana fanampiana, rehefa avy namaky momba izany tao amin'ny Palm Beach Post. Tsy mbola nandre izany eo anatrehan'i dia. Iray ny zanany reniny: namono tena. Tsara, fa ratsy loatra, Ary nisy ahitra tsy izany.
Raha zavatra izany dia miasa toy ny purported, Izaho rehetra ho azy. Anana izay fanaintainana
relievers. Tsy misy maharatsy izany.
Vanin-taolana aho amin'ny tonon-taolana maro amin'ny fanaintainana tsy tapaka. Nahazatra ahy ny mifoka rongony saingy sarotra loatra ny mahazo sy tsy te-hanao raharaham-barotra amin'ny mpivarotra an-dalambe. Dia an-tserasera toerana izay mivarotra ara-dalàna ny zava-maniry fotsiny ny Alley.
Noho ny Palm Beach Post. Ankehitriny ianao kiddies kely, hiverina any amin'ny fianarana sy ny mitsahatra mitady hahazo avo ny fotoana rehetra. Izaho dia 66 Bika vehivavy efa voangony tsy fanaintainana, fa ny sasany fahendrena. Fantatro ny zavatra ataoko.
Izao no lazaiko amin'ny Fanjakana: Mitandrina ny lalàna eny vatako.
Dia halefako Fantatrao ve izay nitranga.
Aho manoratra lahatsoratra iray momba ny kratom (tsy tahaka ny anankiray ao amin'ny Palm Beach Post!) ary ho fantatra mba hahitana ny fomba ny ahitra niasa ho anao. Misaotra!
Voavonjy ny fiainako
Nanomboka nitondra Kratom Ary nomeny ahy ny aretin'andoha rehefa manao firaisana. Aho tsindry mahazo ny rako homarinana avy amin'ny teny foana aho, satria namaky mikasika ny olona tena manana tosi-drà avo toy ny vokany. Ireo no ho zava-dehibe aretin'andoha mafy sy mampatahotra. Nalaiko ny ranonorana ho tony ary saika lasa avy. Tsy ilaina intsony ny milaza, Tsy handeha aho haka azy intsony. Raha mieritreritra ny manandrana azy io, tsy. Mampidi-doza loatra.
Vao nanomboka nampiasa ny Jeff Stryker Ultra Azo Dong ary mahazo fanaintainana aho amin'ny fivaviana faritra aorian'ny firaisana ara-nofo. Mazava ho azy fa tsy handeha aho ny hampiasa azy io intsony. Raha toa ianao ka mieritreritra ny manandrana azy io, tsy. Mampidi-doza loatra.
Mananihany kely rehetra, Raha izany fa ny momba, mankanesa any amin'ny dokotera sy hahazo ara-batana. Mety kratom tsy mety ho anareo *….Aho Tsy mahazaka ny IV vy mila fitsaboana aho hiadiana amin'ny tsy fahampian-dra mafy. Mila maka ny fitsaboana simika sy ny kilasy steroid benadryl Mitete alohan'ny IV izaho no hahafaka ny vy ka tsy manana asma ratsy fanafihana. Izaho no latsaky ny .02% ny mponina mahazaka ny IV vy….ary aho fa tsy hilaza hafa tsy ny maka izany satria “mampidi-doza loatra”….maro ny olona mila izany ny ho tafavoaka velona, anisan'izany ny tenako. Satria Hianao no nanao ny fifandraisana eo amin'ny kratom fa vao nanomboka naka sy ny aretin'andoha aorian'ny firaisana ara-nofo dia tsy midika fa ny olona rehetra dia hanana ny fanehoan-kevitra (raha kratom aza ny anton 'ireo aretin'andoha). Nanomboka nampiasa kratom, ary nahatsikaritra fa ny orgasms matanjaka kokoa matetika sy ny libido no niverina….Tsapako toy ny aho tamin'ny faharoapolo taonany indray! Ho zava-dehibe aho miala tsiny ianao tsy manana ny fanehoan-kevitra ho kratom. Rehefa avy 18 taona ny fanambadiana izaho sy ny vadiko dia firaisana ara-nofo toy ny nataontsika rehefa niaraka, ary ny hany zavatra izay tsy mitovy eo amin'ny fiainantsika dia kratom. Iza amintsika ny tsara? ny valiny: angamba roa amintsika, satria ny olona tsirairay eto an-tany dia rehefa misy na inona na inona amin'ny fomba hafa noho ny olona manaraka satria isika UNIQUE. Fehiny dia hoe misy ny helo ny maro kokoa ny olona izay niaina ny fiainana manova fanamaivanana fanaintainana, fanahiana, ketraka, havizanana, sy ny fahalalahana noho ny olona avy amin'ny opiates nitatitra aretin'andoha aorian'ny firaisana ara-nofo. Ny toro-hevitra ho anao? Aza maka levitra lehibe toy izany ny kratom ary miezaka indray. Raha maka kratom be loatra dia afaka miaina aretin'andoha, maloiloy, ary ny fivadibadihan'ny lafiny fihetseham-po…ka midika izany fa efa nalaina be loatra. Isika ihany koa tsy hevitra izay nahazo azy, ny levitra ianao nitondra, inona no aretina no naka….fa izay rehetra nahazo fantatray ianao kratom avy amin'ny headshop Nampiana amin'ny voajanahary koa omen'ny (izay tsy tokony handray beginners satria ny faran'izay mifantoka amin'y ka tsy mila ho be), ianao naka Borneo fa tsy fotsy mena Indo, naka kely kokoa noho ianao tokony, ka nanome ny tenanao ho aretin'andoha. Angamba aho kokoa ny vola noho ny tsy. Noho izany dia tsy hoe tonga amin'ny dresaka mba hanampiana ny olona sy manome vaovao spotty, vaovao misongadina hamela ka milaza kratom dia mampidi-doza. Ny fandraisana andraikitra no mampidi-doza kokoa ny soso-kevitrao, mazava.
marina izay nolazainao!
Mihomehy aho mafy aho, tsy mila Kratom…..voajanahary fanamaivanana fotsiny no nanome ahy!
Ao amin'ny taratasy lehibe…..no manana tosidra olana teo anatrehan'ny Kratom? Izaho ihany koa no manana mahatsiravina aretin'andoha sy ny tosi-drà ambony. Tsy azo antoka raha toa ka ny Kratom noho ny tantara ny aretin'andoha sy ny tosidra olana noho ny tiroida. Sa ny Kratom manao azy na dia ratsy? Handeha intsony ny Kratom ary avy eo hanara-maso. Koa aho nahazo ity Kratom avy amin'ny headshop ka izay mahalala izay ao. I baiko avy amin'ny voamarina orinasa mba hahitana raha izay hanova na inona na inona?
Miala tsiny ny mandre fa nitarika toy izany kratom vokatry mahafinaritra ho anao. Azo antoka fa manana fahazoan-dalana mba milaza na inona na inona tianao; fa mikasika ny fifanakalozan-kevitra manana mahasoa momba izany, fa rariny ny extrapolate ny fomba vokany anao ny mponina rehetra. Maro ny olona mahita azy ho tena sarobidy ny ahitra na ny fanaintainana fanampiana, fanesorana attenuation, na fialam-boly fotsiny ho toy ny zava-mahadomelina. Comments toy ny anao dia mety hampiova hevitra an'ireo olona tsy miezaka izany izay afaka mandray soa avy amin'ny maro ny vokatry ny tsara. Misy isan-jato kely foana izay manana fihetsika ratsy na traikefa, tamin'izay zava-mahadomelina, fa ny zava-nitranga dia iray ao anatin'ny fandinihana santionany maro be ary tsy mba solontenan'ny malalaka kokoa ny fifanarahana. Peace!
Sherri- I mahazo ahy avy kratomhigh.com. Tonga ao amin'ny vovoka izay mamantatra tsiron-mahatsiravina endrika, fa hihinana azy fotsiny any amin'ny OJ. Heveriko fa na izany aza doha, Ary mitandrema. Ny olona sasany dia manana soritr'aretina fialana, ny hafa kosa tsy mba. Tsy mahazo avo amin'izany, fa izany no manome hery ahy sy hanampy amin'ny fanaintainana. Mirary anao ho tsara vintana!
@deusopus, satria nanana olana ianao izany dia tsy midika hoe ny olon-drehetra no.
Tsy mandeha manodidina ny milaza ny olona tsy mba hisotro kafe ve fa misy olona vitsivitsy izay fihetsiky ratsy ny kafeinina ve ianao?
Tena mitandrema aza (toy ny zava-mahadomelina ANY), raha misy olana efa misy BP mila mampiasa mitandrina amin'ny Kratom. BP avo aho nandritra ny taona maro izay nitondrako eo ambany fanaraha-maso amin'ny fanatanjahan-tena sy ny sakafo, ary Kratom niasa tsara fotsiny; mandra-I mifamadika sorisory ao.
I naka vaovao aretina tsy nanandrana aho aloha sy ny BP voatifitra hatramin'ny 170/95 mandritra ny ora vitsivitsy, soa ihany izany fa nidina tsara fotsiny.
Manaraka Ho tonga toa azo antoka ny “wean” ny tenako ho samy hafa sorisory ao.
Moa na iza na iza mamaky ity tranokala ity? Tsy fantatro,. Palm Beach Post dia nitatitra fa amin'ity herinandro ity 20 Bika lahy izay nitsambikina eny Tetezana hamono tena tamin'ny volana lasa no manana ny rafitra kratom. Izy dia teo antidepressents. Ary ny reniny dia ho “ady kratom”. Ahoana ny fanampiana ny tanora lahy amin'ny fahaketrahana? Kratom tsy nahafaty azy. Hamono tena izy. Tsy manana ny fahaiza-manao mba hiady miatrika fahaketrahana. Tsy fotsiny levitra. Manana ny hanampy ny tanora. Tsy amin'ny alalan'ny fametrahana guardrails amin'ny zavatra rehetra, fa amin'ny alalan'ny fampianarana azy ireo ny fomba hiatrehana ny fiainana.
Ankoatra izany, ny organique mitragyna speciosa izay nividy an-tserasera aho dia miasa tsara noho ny fanaintainako fanampiana. Izaho dia 66 ary mahalala mihitsy izay ataoko.
Raha toa izy ireo manome tsiny ny Kratom dia mila manome tsiny ny mpanohitra koa depressants… Ny zanak'osy Kivy, mazava ho azy fa. Efa nisy ny tenako tena somary.
Mino aho fa mety ho aho ny hanandrana zavatra ity. Te-hiala ny manohitra ny depressants..the iray aho amin'ny dia sarotra iray.
Ary afaka mampiasa ny sasany fanamaivanana fanaintainana….. Manantena manampy.
Fantatro Ian, ilay zazalahy izay nitsambikina ny malahelo sy ny fahafatesana aloha be. Izy ihany no tsy nisy halaviro ny reniny noho ny mivoaka avy ao amin'ny trano fandriany, fa ny reniny efa voan'ny zanany (dia ny any amin'ny sehatry ny fitsaboana, raha izay midika na inona na inona afa-tsy ny tsy mety lefy ny fanohanany pharmaceuticals) amin'ny fahaketrahana mafy. Kratom mazava tsy nanana anjara ao amin'ny fahafatesana aza. Ny reniny nitondra azy hino fa ny zavatra rehetra tsy mety eo amin'ny fiainany, ary raha tokony hiatrika azy ny nenina izy dia ganging ny amin'ny mpanao politika mba hanampy handrara io harena voajanahary fa ny tenako sy ny mampiasa amim-pahendrena an'arivony isan-kerinandro. Ny fifantohana amin'ny kratom ho mampidi-doza ny toaka sy ny pilina raha misy soso-kevitra na ekena ao an-dafin'i amiko. Zava-mivaingana porofo fa Big Pharma olom-pirenena tsy te mahita fanampiana avy amin'ny akora voajanahary amin'ny kely na amin'iza na levitra. Raha mbola afaka mijery ara-barotra ho an'ny sasany fanahiana pilina izay mety hiteraka tampoka cardiac fisamborana, fahafahana mahatsapa ao amin'ny ratsam-batany sy ny eritreritra hamono tena. Mitendry pianô fotsiny izay mozika ao amin'ny fiainany sy tsy hitsahatra nanome sakafo ny firenena levitra.
Mampalahelo tahaka ity tantara ity dia mety ho, Toa io tovolahy io nanana tena lalina ny sasany, ary tena ela mijoro olana aretin-tsaina. ary raha, raha ny tena izy, ny fiaviany avy tao an-trano fandriany hahatonga azy tokony hohalavirina reniny, izay teo an-asa iray manontolo lisitra lava be ny fahasarotana.
Ny ankamaroan'ireo reny rehetra izany dia mitady zavatra na olona mba hanondro iray mankany amin'ny rantsan-tànany, mba handà azy manokana tsikombakomba amin'ny zazalahy famonoan-tena.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga ny fahaketrahana lalina miteraka famonoan-tena…tsy matetika mitranga raha mbola ny olona no tena ketraka…nandritra izany fotoana izany, ny olona zara raha manana ny hery hanao ny asa. Ny tena marefo-tsarotra sy fotoana ho an'ny famonoan-tena no tsaina rehefa nanomboka hampitraka, rehefa tena manomboka mahatsapa tsara kokoa. Tsy dia manana ny hery namono tena, ary izany dia mandritra izany fotoana izany ny Psikiatra mahalala ny marary mba hijery akaiky.
Misaotra Chris. Ireo levitra dokam-barotra izy ireo mampiseho fa mampino. Milaza izy ireo fa mba hanampy anao, dia rehetra ireo vokany mahatsiravina tsy maintsy handefitra.
Avy eo dia, herintaona taty aoriana, manana mpisolovava barotra nanao hoe: “Raha toa ianao na ny olon-tiana iray, naka ****** fanafody, efa tongony lavo eny na maty, dia afaka manampy anao amin'ny fitoriana…”.
Kratom tsy mahatonga iray ketraka na nanasitrana fahaketrahana. Misy, na izany aza, Pharma psychotropic fanafody maro izay Psikiatra fanafody (anisan'izany ny seroquel) izay afaka sy hamono tena ve hiteraka asa. Misy olona dia tokony hilaza ilay tovolahy ny reny sy ny hitory ny mpitsabo aretin-tsaina, fa tsy. Aho manokana dia nanatri-maso toy izany psychotic malpractice sy fihetsika ho toy ny vokatry ny ratsy anti-depressant. Jereo drugs.com/seroquel.html
Efa voan'ny fahaketrahana Major Olana Mifandray. Izaho koa mijaly noho ny mitaiza ary indraindray nikiky PAIN. Fanafody zava-mahadomelina dia ny fahafatesan'ny firenena ity, Tsy mananihany aho. Efa tamin'ny Kratom nandritra ny roa herinandro, ANDRIAMANITRA O!!!! Tsy afaka na dia hanomboka hilaza aminao fa tena tsapako tsara kokoa ara-batana sy ara-tsaina. Nitomany aho toy ny manoratra izany, satria nieritreritra aho ny hany lalana ho ahy ny VE intsony ny fanaintainana dia famonoan-tena. Ary tiako holazaina ny fanaintainana ny fahaketrahana sy ny fanaintainana ara-batana. Tsy mbola mbola nanampy ahy toy izao. Miomana aho mba hivoaka sy fototra voninkazo ny olona!!!! Izany no mahagaga ho ahy!!! Andriamanitra nanome antsika be dia be mba hanampy antsika tsara an-tany no mandeha eo, tsy maintsy ho mahalala bebe kokoa ny fanaintainana ara-boajanahary relievers sy handresy ireo manambitana fanafody mpamono olona faobe. Raha azoko mandrakizay mandrakizay manampy na iza na iza na inona na inona toy izay efa nisy amin'ny alalan'ny, Ka izao no nanombohako amin'ny kratom, ary hanorina fanarenana fandaharana avy izay. TAHIN'ANDRIAMANITRA, ho marani-tsaina ka mandehana mamboly voninkazo ny sasany ya'all!!!
Tena aingam-panahy!! Ive nanana kivy mahery 5 taona izao ary izaho niezaka ny mahita phycologists sy ho amin'ny meds . Izany no mahatonga ahy tsy mahatsapa ny olona iray. Manontany tena aho raha toa izany no fiainako dia manomboka izao ? Nisy olona nilaza tamiko momba ny kratom ary tsapako kely natahotra ny hanandrana azy .
Handeha aho amin'izao fotoana izao “mangatsiaka vorontsiloza” eny ny Norco, rehefa 6 taona sy eny amin'ny. Ny voalaza io aho avy ny fanaintainako Mpanao fanafody. Nitondra aho 70-150 mgs ny Norco isan'andro. Raha tsy maka izany, Manana vatana fanaintainana, ketraka, fanahiana, aretim-pivalanana, mahita tory, adala tongotra kibo, sns. Nanomboka naka Kratom omaly ary nanampy. Natory aho, raha ny marina omaly alina, nefa mahatsapa sasany nofy hafahafa. Koa aho no hifoha mahatsiaro ho tena henjana, ary ny malemy fanahy aretin'andoha, ary ny vava maina. Ankapobeny, Faly aho izany, ary izaho koa tsy manana ny faniriana hifoka sigara :)
Misaotra anao noho ny nanomezany Kratomonline mahatahotra ity toerana!
Kratom manao asa ho an'ny olona maro, ireo vokany tsara no ho eo amin'ny.
Raha mipetraka any Eoropa, manandrana kratomgardens.com
ny marina vidin'ny, Tsara asa fanompoana sy Fast fanaterana
Efa takin’ kratom amin'ny & eny noho 4-5 yrs izao for fanahiana & ketraka & tsy nisy vokany ratsy hafa akory avy aminy afa-tsy ho foana angamba ny iray na roa alina. Na izany aza aho, mbola miezaka ny hitady levitra & na mitambatra mba hanampy tamin'ny mitaiza mahita tory.
Andramo misy aretina Sumatra kratom.
Nanomboka nampiasa kratom hafa loko andro vitsy lasa izay koa mahita izay ho vokatr'izany eo amiko ireo. ADD aho, PTSD, I C., Fibro, ary….. Eny ary zavatra voalohany no manamarika ny mena dia ny fahatsapana ny fialam-boly sy ny fikorianan'ny. Efa nanapaka ny PRN ihany koa ny fanafody ho antsasany, tsy nomanina, Fotsiny aho fa tsy mila azy ireo. Foana aho voan'ny XYZ for 8 taona. Gaga aho! Koa ny Green toa haka ahy, raha mbola nanao ahy ny fotsy mahatsapa vatany, fa mbola afaka manao zavatra. Mivavaka aho fianarana azo atao ny fanampiana hamantatra izay lalan-drantsika afaka manampy aretina, mbola mitandrina ny FDA lasa!
IC ihany koa aho, fa 10 taona. Fotsiny aho namaky momba ny kratom ao amin'ny FB lahatsoratra, tsy mbola nandre izany amin '/ F. Izany no manampy amin'ny IC fanaintainana, Ary ahoana ny hatetika? Mahasitrana anao ve izany, na ianao no mila maka izany ho ny sisa amin'ny fiainanao? Fantatro rongony manasitrana IC fa tsy misy amin'ny fanjakana aho mbola.
Nanomboka nampiasa kratom momba ny herintaona lasa izay hiady soritr'aretin'ny MS. Niezaka orinasa maro isan-karazany 98% tolotra aterineto. Tsy tiako rehefa hitsidika 'headshops’ na miantso manodidina ny toerana maro tany amin'ny faritra avaratr'i VA ve ianao raha ametrahantsika mitondra kratom?? Ny tsara indrindra hitako dia avy dayakchillspot.com
Ny tena tsara indrindra dia efa nanandrana!! Na, fa efa niasa ny BEST ny olona no voadio tamin'ny lasa. Soritr'aretin'ny MS miainga avy amin'ny fanaintainana, atidoha zavona, fahitan-tory, toe-po nitaredretra, fahaverezan'ny asa, ketraka…Enga anie aho no milaza PAIN!!! Ny hany zavatra tsapako ao amin'ny faritra sasany ny tena dia nanaintaina mafy isaky ny hetsika. Aho tamin'ny 23 levitra isan-karazany isan'andro, tsirairay amin'ny fanantenana hiady maro soritr'aretina. Indray mandeha aho nahita dayakchillspot, Afaka manapaka indray 12 levitra isan'andro. Afa-tsy ny resaka isan-kerinandro. Fa tsy tany am-boalohany aho drafitra mba hanapaka indray ny meds, mazava ho azy fotsiny nitranga. Aho, fa tsy nidina ny safidy olona iray izay iray na orinasa na ny aretina hoy ny olona no misafidy. Fantatro ny tena miasa tsara avy baiko avy amin'ity tranonkala ity. Raha ny marina aho nampahafantarina ny Dayak amin'ny alalan'ny olona iray ao amin'ny Facebook fanohanana MS vondrona. Tohina aho, ary faly be fa tena niova ny fiainako ho tsara kokoa!! Firariantsoa tsara indrindra ho anareo rehetra, ary miadia hitandrina azy ara-dalàna!! Izany no namonjy ahy ka namonjy ny fiainako!! Isan'andro I mandry zavatra mahafinaritra io zavamaniry no afaka atao ho ahy :)).
Wow, Ny expierence nanome ahy fanantenana! Ive Tena leary ny Kratom.I mankahala ny pilina ho voalaza & ny vokany! Aho be dia be ho an'ny mitaiza sciption meds fanaintainana amin'ny hazondamosiko,indray manerana! Manana vanin-taolana avy ny vozony midina,PTSDA., Fivadibadihana adala ateraky kivy fanahiana,kozatra fahavoazana sns. Im 55yrs hankafy fiainana aho, tsy mahatsiaro ho antitra,fa fantatro ny Pharmacuticals no ho maty aho! Zanako lahy aho nizara Kratom W vao haingana! Gaga aho @ ny vovoka afaka manome ahy ny andro manodidina ny tanàna nihazakazaka W Tsy hisy fanaintainana! Dia tsy crabby rehefa tonga tao an-trano aho! Natory aho ka tsara! Nifoha nahatsiaro tsara noho atỳ an-years.Yes, faly mijery ny dosing.Im nampihemotra ahy ny zanako lahy ity amin'ny tranonkala! Raisiko amin-kafaliana ny olona hafa tantara. Ny zanako lahy dia manana loharanom-baovao azo antoka locally.I handray loharanom-baovao azo antoka tranonkala & betsaka Info I afaka mahazo! Misaotra Deb
Marihina aho ho vokany ratsy fa rehefa lehibe fandraisana fatrany isan'andro ( eo ho eo. 15-20grama) kratom mahatonga ny loko maitso eo amin'ny hoditra. Izany dia vokatry ny famaitso hanangana ao amin'ny sela. Tena zara fa tsikaritra, fa toa.
Tsy misy atahorana ny mampiasa Kratom ny mitaiza fanaintainana raha toa ianao isan'andro amin'ny fatra-dra thinners?
I nanana 16 Oz vera ny dite fotsy omaly alina eo amin'ny fisotroana. nanana 8 drinks in 10 ora roa sakafo, izany ara-teknika, Tsy nisotro aho; na izany aza, Manome tsiny aho noho ny fanaovana ny kratom ahy nauseous. Nataoko izay nandalo avy. Ny mpitsabo mpanampy fa Kratom dia opiate (Mila fikarohana izany) ary tsy tsara ny miara toaka. Fampitandremana tantara hanao fikarohana bebe kokoa amin'ny fanandramana na inona na inona alohan'ny nataonareo tao an-tenanareo.
toy ny fanaraha-maso, kratom dia tsy opiate, fa izany no mamatotra ny mpandray ihany toy ny ôpiôma. Hitako ny antony dia mety ho mahasoa ny ôpiôma withdrawls.
I, koa, Afaka mitantara ny valin-. Manana aretina mitaiza fanaintainana sy ny fanahiana ankapobeny. Bali kratom no zavatra tsara indrindra ny tanteraka mba hanampy ahy!…ary izany dia lehibe iray understatement!
Manana namana koa aho amin'ny koditra, aretin-kozatra, ary MS….dia tena manampy azy ireo ihany koa! Simply mampino!
Andramo avy Coastal Kratom (ny Kilonga) ary Herbal famonjena (faharoa)….izy ireo no azo antoka indrindra sy tsy miovaova.
Tsara vintana, ary manantena aho fa ny tsara indrindra eo amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao!
kratomdivine.com manana Ultra Zen Premium Maeng Da kratom ary an-tsambo FAST! Efa foana Excellent nanana mpanjifa azy.
Mpiboboka toaka aho. Fantatro ny fisotroan-toaka mafy vokatry avy amin'ny fanahiana ary aho ankehitriny amin'ny Ativan raha ilaina mba hanampiana ny fanaraha-maso izany ka dia tsy hisotro. ny tara, ny Ativan no toa tsy miasa intsony, na dia miaraka amin'ny fitomboan'ny ny levitra vola. Tena vao haingana aho nampidirina ho Kratom (Indo maitso?) dia nahita ny vokany tena mampitony, miaraka amin'ny faniriany sy ny tebiteby lasa. Nisy olona hafa nahita izany Kratom fa tena nanampy tokoa fiankinan-doha amin'ny toaka? Efa namaky momba ny fahombiazana amin'ny nikôtinina opiate sy ny fahazaran-dratsy. Masìna ianao, hizara raha manana toaka fiankinan-doha, na mahafantatra olona iray izay efa nanampy. Nampahery be ahy izao ankehitriny izao amin'ny Kratom! ary mamoy fo ny handaka ity fisotroan-toaka!
Afaka milaza aminareo aho, avy amin'ny zavatra niainany. Zava-doha, ary dia hangala ny anao. Na izany aza, ny ratsy indrindra ny tsy fananana hatao mpifoka. Raha toa ianareo rehetra efa natao dia vovoka isan'andro, ny fanesorana dia ho bebe kokoa noho ny zavatra ara-tsaina. Ny fahaketrahana ny ratsy, ary mitaky ny roa andro ny hiatrika izany. drafitra Manampy. Noho izany no toaka. Noho izany no ahi-dratsy. Noho izany lota no manga. Fa ny fahaketrahana dia ho tianao mihoatra noho ny firaisana ara-nofo kratom. Bad. Kratom nataoko ho an'ny lasa 5 taona. Powder ihany. Ny efa saika isan-kerinandro hatramin'ny farany aho levitra. Mahatsiaro Toy Ny Anaty volana. Mieritreritra aho raha madio aho indray andro any ao anatin'ny ahy dia mbola te izany. Ve izany raha tianao. ny fahafinaretana, fa mahafantatra izay tena mahazo an-.
tanteraka! Izaho no naka azy io ho 6 – 7 volana toy ny fanoloana ny levitra. Efa nampiasa aho levitra recreationally (CWE) recreationally, ary avy eo dia mifamadika ny kratom satria madio kokoa fotsiny ihany fa namoaka ny vokatra. Tena sneaks ny anao. Tsy mahatsiravina… fa tsara fotsiny izany ary manana izany kely lafy ratsiny (tsy misy kaloria, Tsy manao toy ny ahi-dratsy mihinana) mba hahafantaranareo ny tenanareo naka azy mihoatra noho ny tianao na manantena ny. Maro ireo mpampiasa toa ahy mitantara hoe mandeha avy indray mandeha isan-kerinandro ho indroa isan-kerinandro rehetra nony alina ny andro fiatoana etsy sy eroa. Tsara vintana ho ahy aho, tena tena mahalala ny zavatra aho no manao izany Freak avy momba ny na inona na inona, ary hanara-maso misy fahazaran-dratsy, ary afaka milaza fa mbola hitako somary aho nandevozin'ny.
Toa anao nanao hoe:, Rehefa mahazo izany avo (dia nanomboka ho ahy ny fotoana voalohany naka levitra ho mangatsiaka), dia atao indray. Izany no opiate avo. Koa inona no mahaliana ny ataonao intsony kratom, indraindray ny fahasambarana bebe kokoa ny vokatry ny (karazana toy ny amin'ny ahi-dratsy, amin'izay mahazo tsara kokoa rehefa mandeha ny fotoana). Mety hampidi-doza koa. ny
Tena mamitaka hoe tsy addicting. Kratom afaka tanteraka ara-batana mahatonga dependance, tahaka ny misy ny opioid. Raha tsy addicting, Ary nahoana no misy ny tena mavitrika subreddit antsoina hoe R / quittingkratom?
Izany tokoa manana fanararaotana mety — tahaka ny mitragynine mamehy amin'ny opioid mpandray — fa * tsy * no “dia azo atao opioid.”
Izao va no ara-dalàna any Oregon ary no hanavotra azy eo an-toerana? Raha izany, no ahafantaranao aiza. Fairview, OR
Izaho no naka izany mba Detox ka dia nahazo nandalo fitsapana ny fisotrony ny vilany. Inona Voamariko aho taloha no manana tena mafy tatavia, izany hoe tiako ihany no mba urinate 2 fotoana isan'andro. Ankehitriny aho mihazakazaka ho any amin'ny efitra fandroana, satria ny faniriana urinate Tena mafy. I ihany no naka 5 pilina iray volana eo ho lasa izay, ary dafin'i vokany mbola amiko. Na iza na iza hafa manana fiantraikany-dafin'i? P.S. Nataoko mizara ny fitsapana
Ve kratom fisotrony Asehoy amin'ny fitiliana?
Kratom fitsapana no misy zava-mahadomelina, nefa tsy tena be mpampiasa amin'izao fotoana izao. Ny fitsapana izay fisotrony eo ho eo ny mpampiasa no tsy fitiliana ny fampiasana Kratom, toy izany koa ny alkaloids ao amin'io fototra dia tsy tokony hampiseho ny. Na izany aza, Raha misy olona manokana ho an'ny kratom naka fanahy, Avy eo dia mety maneho ny.
Ny Buddy dia amin'ny fizahan-toetra sy fitsapana manana fisotrony miakatra, dia kratom Asehoy ny fizahan-toetra?
Niezaka fotsiny aho Experience Botanicals Maeng Da Kratom amin'izao fotoana izao. 1 tblsp amin'ny kely Juice Jamba Orange tamin'ny tosika ny vitaminina C. Ny tonga avy Kratom-doha fivarotana in Beaverton Oregon. Izany dia tanteraka ny tena zava-. Ny mpivarotra mahay be. Nilaiko izany izao. Tsy mbola nahazo na fanampiana avy amin'ny vola kely ny norco namela aho isam-bolana ho an'ny fanaintainana mafy mitaiza manerana. Manana olana maro hafa anisan'izany ny fahaketrahana XYZ,
Inona no azoko lazaina momba ny zava-nitranga dia nahatsapa fa be ny 40 minitra. Ary nahatsapa aho vao nihazakazaka 5 kilaometatra. Kilemaina aho, ary tsy afaka na dia manenjana ny tsy misy izany hanisy ratsy nefa toy ny hoe nisy olona nahatsapa asio cortisone tifitra tsara ao amin 'ny andilany, indray, tongotra, ary ny hazondamosiko! Tena tsara. Ny fahavononantsika sy youthfulness Nahatsapa ho naharitra ny 3.5 ora. Fa tena mampino ahy ny iray na inona na inona afaka manampy ahy be izany.
Miala tsiny koa aho momba ilay tovolahy izay nitsambikina eny amin'ny tetezana araka izay nijery lahatsary maro hianatra momba Kratom. Mino aho fa ny zavatra dia hoe Seroquel XR sy Gabapentin no tokony homen-tsiny. Hitanao. Taorian'ny roa mafy na dia nanana lozam-piarakodia sy ny taloha efa ho namono ahy izy nonina tamiko ara-bola, dia nifindra tao amin'ny trano aho. Nandritra ny rehetra manontolo 6 volana ny NP amin'ny toerana hafa sy Kaiser Nanandrana aho tamin'ny nahay ny NSAIDs sy Gabapentin, antidepressants (izay efa nahatonga ahy hiditra any nifanintontsintona Raha tsy noho ny niantso azy ho ativan) ary nomena mihitsy aza aho Seroquel XR maimaim-poana nandritra ny herintaona avy Astrozeneca. Dia nipetraka manodidina ho an'ny 6 volana tena ketraka sy matahotra. Natory aho amin'ny fotoana rehetra. Dia foana ny fianakaviako Manahy.
Inona no zava-nitranga farany izao dia fa Izaho no marary ny pharmaceuticals. Te-hiala ny gravy fiaran-dalamby ary te-hilaza fa mino aho fa tovolahy namono tena ny kely, na tsy misy fanohanana avy amin'ny fianakaviany sy ny tsy nahazo ny karazana fanampiana ilaina. Koa Gabapentin amin'ny fatrany lehibe mahatonga ny olona hamono tena. Nieritreritra aho ny famonoan-tena, rehefa nahazo fiantohana aho tamin'ny farany tamin'ity taona ity sy ny dokotera naka ahy eny amin'ny 1200 levitra aho on.I maintsy nijanona ny Seroquel XR koa ny tongony rehefa nanomboka nifindra raha misaraka amiko maniry azy ireo koa. Dyskensia? I farany nanorim-ponenana tao amin'ny Depakote 500mg, ary izany no. Te-hiala izany fa zavatra iray amin'ny fotoana.
Miala tsiny aho ny olona iray nanana mihitsy ny handrombaka fahefana, ary ny tovolahy nitsambikina eny ny tetezana, fa izany no tena sarotra ny mahatakatra fa ny zava-mahadomelina ireo orinasa tianao miankina azy? Manana mpahay lalàna sy ny governemanta mba hiarovana azy ireo. Inona no mitombo avy amin'ny tany sy ny voajanahary ary nampiasa tamim-pitandremana, ary ara-dalàna sy andraikitra ho an'ny tanjona tsara dia tsy zavatra tokony hanakatona. Te-hividy ny zavamaniry sy manomboka mitombo izy ireo mba tsy mitranga amiko. Aho fa tsy te ho lany. I ihany no naka 1 sotrokely, ary nanao izay mahitsy aho izao hariva izao. Dia tsy te handray hafa levitra, ary Lasa tony.
Nanampy ahy hanao Gourmet sakafo ary izaho sembana. Izany no zavatra fa ny mpiray efitra tena variana tamin'ny. Misaotra nihaino. btw. I mankahala zava-mahadomelina koa barotra izay lazaiko aminareo dia afaka manana tapaka lalan-dra na ny aretim-po, na hamono tena hevitra rehefa mampiasa???? Nahoana no ara-dalàna ireo zava-mahadomelina ho anay ho fivelomanay? Ny tiako ho lazaina Manaiky aho ny sasany dia tena ilaina ny dokotera fa mila fanafody amin'ny malina. Ny zavatra voalohany misy ahy dia maro samihafa ny anti-depressants. Dia nandeha namaky ny 10 avy tamin'ny olona izay niasa na oviana na oviana tsy nisy dokotera ve nanontany izay hanjo ahy. Oh, ketraka ianao sy izay tsy miasa? Eny ary mamela andramo hafa. Noho izany dia tsy marina. I ankehitriny manohana Kratom.
Debra, Im kilemaina avy amin'ny fiara roa wrecks & ny victem ny zaza abuse.Im no matahotra ny gabapentin & ny avo tsy doses.Ive naka araka izay fanononana tsy scribed! Nanana fihetseham-po mafy lyrica! Raha tsy ho tena namana tsara izay tonga tao amin'i hijery ahy,Aho, dia tsy velona! I mahazo lafiny ratsy rehetra vokany rehetra meds vaovao rehefa manatsofoka @ antsika izay mijaly! Ive nanana fihetseham-po ratsy ny fanaintainana isan-karazany meds & depressants.My fo mpanohitra mivoaka ho an'ny zatovo izay jumpd avy amin'ny bridge.I W mino ny foko & Tsy fanahy Kratom! Fantatro ny 3 ny olona ao amin'ny Seraquel izay niezaka suicide.One zatovo ny olon-kafa 40 taona! Halako ny sambatra lanitra manga & Zava-mahadomelina havana teny dokam-barotra! Vola izy ireo fa ny mpanankarena tia zava-mahadomelina ny orinasa & investors.Ive efa tamin'ny gabapentin oxycodone Wellbutrin&Celexa @ izany fotoana izany. valium,Allergy etc.I naka 4benadryl,2valium,4melatonin,2 Nyquil,2 allergy levitra &celexa mba hatory & eo taitra tao afovoan-alina,maka ny fihodinana faharoa ny ambony meds ny sleep.As W na inona na inona mampiasa W Kartom mitandrina untill hitanao ny marina levitra ho you.I Misaotra an'Andriamanitra, fa raha tsy noho ny Kartom ny zatovo tsy ho here.He Tena kivy,tezitra & matahotra ny hanisy ratsy ny tenany, na dia nampiasa others.He Kartom Manana ny zanakao hiverina! Raisiko amin-kafaliana ny hafa expierence Feedback. Deb
Miala tsiny, azafady ny Miss-tsipelina. Manana Dyslexia.
Manana fanontaniana aho. Kratom ve mampiseho ny amin'ny zava-mahadomelina fitsapana.
Manana koditra sy aretin-kozatra, namana iray nampifankahalala ahy tamin'ny Kratom. Ary nanao fahagagana ho ahy.
Ny asa dia mitaky fitiliana kisendrasendra zava-mahadomelina. Ka dia no hany mampanahy aho. Ary tiako ho fantatra izay karazana Kratom haka ho an'ny fepetra
Misaotra anareo rehetra mialoha
Mona, Izaho koa Fibro sy ny fahaketrahana. I hitondra vicodin & Tramadol noho ny fanaintainana sy ny zoloft noho ny fahaketrahana. Efa nahita aho ny fanaintainana mpamono olona hanome ahy ny fanaintainana fanampiana sy ny hery no mila mahazo ny alalan 'ny andro.. Tsy mbola nanandrana Kratom fa Liana aho! No tsapanao na mitondra hery hery avy amin'ny Kratom? Ary aiza no mividy azy avy ary inona no ampiasainao?
Vao avy nandre ny Kratom omaly nanipy-namana, ary nanomboka nanao aho fikarohana vao hahalala raha marina izany ahitra ho ahy. Efa nampiasa zava-mahadomelina sy ny toaka eo ary eny izy noho ny lasa 15 taona, opiates satria ny zava-mahadomelina ny safidy. Fa ny lasa 3 taona aho teo amin'ny methadone efa fikojakojana fandaharana, 2 taona maro lasa izay dia nanomboka ny fisaraha-nono ny tenako tsikelikely eny ny zava-mahadomelina. Ny avo indrindra dia levitra 140mg, izao aho nidina ho any 58mg. Mandoa aho $320 iray volana avy tany am-paosiny noho ny methadone, na amin'ny 2ml aho na 200mg, dia mbola ny vidiny ihany. Ny fahasembanana aho noho ny zava-mahadomelina olana, fahaketrahana sy ny tebiteby. Tsy afaka manam-bola intsony. Bebe Kokoa, Tsy te-ho eo amin'ny zava-mahadomelina mihitsy! Te-mifamadika ny zavatra izay azo antoka kokoa, tsy ho ahy hahatsapa avo ( ny nods), zavatra izay hisolo ny mpandray ao amin'ny atidoha, ka tsy mitady mafy zava-mahadomelina. Izaho koa te zavatra izay hanome ahy hery mba hanatanterahana ny zavatra eo amin'ny fiainana andavanandro. Mety ho lehibe miampy mba hanamaivanana ny soritr'aretina ny fahaketrahana sy ny tebiteby koa. Ny Detox ny methadone, ny fahaketrahana sy ny tebiteby takaitra ahy ny fanatanterahana ny asa kely indrindra eo amin'ny fiainana. Na izany na tsy, avy amin'izay aho namaky azy io feo fa mety ho kratum ny vahaolana. Manana fanontaniana maro aza. Iza aretina ny tsara ho ahy? Ohatrinona no mila mividy amin'ny ampahany handray isan'andro ary ohatrinona no hitondra isan'andro. Manana fandeferana avo dia avo ny zava-mahadomelina. Ho Kratom nanatanteraka ny psych meds amin'izao fotoana izao aho mandray ( Aho fa tsy mba amin'ny MAOI ny).Izaho koa mikasa ny farany wean eny amin'ny kratom koa. Niezaka aho ny ho miankina amin'ny fananana! More fanontaniana, iza no fanta-daza avy amin'ny loharanom-baovao mba hividy? Ny tena fanontaniana, ahoana no mifamadika avy methadone mba kratum? Misy dingana ny fisaraha-nono? Tsy te ho ratsy eo amin'ny ara. Raha misy mpampiasa iray hafa ity vokatra toy izany koa izay manana tantara toy ny ahy, ary afaka mitarika ahy amin'ny lalana marina aho dia tena mankasitraka azy io!
Vao nanomboka nampiasa kratom ny tebiteby ary ny fahaketrahana. Ny mahatonga ahy hahatsapa sakafo hariva fanairana sy sambatra. Koa hampahasosotra kokoa. Na izany aza, ny vokany hafa no fitohanana sy ny imsomnia. Dia izy ireo hiala?
Tsy misy mahalala tsara raha ampiasaina kratom nandritra ny fe-potoana lava (roa taona) ny fotoana dia maneho fahanterana na tonta any fijery toy ny sasany dia mety hahatonga zava-mahadomelina?
Manontany tena aho raha toa Kratom mety hanomboka anao mampiseho fa simba teo fijery toy ny foana aho naka Kratom nandritra ny herintaona sy tsapako izay mihatra. Rehefa avy aho, efa naka Kratom tsy tapaka nandritra ny fotoana fohy ny olona dia milaza amiko aho reraka mijery. Rehefa tsy nisy olona nilaza fa. Be dia be no carded na aiza na aiza alehako, fa Voamariko fa niova taorian'ny fampiasana Kratom. I tonga tamin'ny eto mba hahitana raha olon-kafa efa niaina izany koa avy eo, ary hitako ny fanehoan-kevitra.
Miezaka ny navalin'i ho roa aminareo — Efa nisotro kratom isan'andro ho an'ny manodidina 8 volana & mitovy taona aho be tao anatin'ny volana vitsivitsy. Tsy misotro toaka, setroka, tsy misy zavatra hafa ny manazava azy. Izany, eny! Aho hoe: Tsy isalasalana fa kratom no manafintohina anao mijery antitra.
Ankehitriny dia te ho fantatra fotsiny raha dia havelako mihitsy rehefa mahazo eny izany. Any hevitra?
Vao avy nandefa fanehoan-kevitra & Izany dia midika hoe tsy mampiseho ny, dia mamintina- Eny tsy misy isalasalana fa misotro isan'andro kratom efa nampanadino ahy ny mijery be taona.
Tsy misy mahalala tsara raha toa ka maharitra-nankany vokatry ny mijery indray mandeha tsara be taona ianao mahazo intsony ny kratom?
(Efa nisotro kratom isan'andro ho an'ny manodidina 8 volana.)
Nanomboka nampiasa kratom ny indray andro noho ny fanaintainana sy ny nahazo azy aho amin'ny specialtyherbstore.com sy ny efa tsara tarehy manampy. Efa natory tsara kokoa ary tsy nahatsiaro ho tsara sy ny fanaintainana efa tsinontsinona. I mahazo migraines sy mafy indray fanaintainana sy ny fihenjanana. Izany zavatra lehibe miasa.
Efa andevozin'ny kratom ho herintaona izao… Manomboka ny mahita ny olana ara-pahasalamana izany mifandray amin'ny fampiasana.
Tena ketraka be ho an'ny olona toa ahy… fa indray mandeha isan-taona ny iray marika avy manodidina, fantatrao ianao screwed ny.
miezaka ny hijanona lavitra izany (raha afaka ianao)
Afaka Kratom ho voasambotra raha mbola nandray chemo?
Namako lahy vao tonga ny fiainana eny fanohanana avy overdosing amin'ny Kraton.
Dia nahita slumped ny drooling amin'ny fiandrasana bisy. Izy avy hatrany nentina tany ER, rehefa tsy miasa intsony ny havokavony noho ny fifandraisana amin'ny atidoha. Eny, Tiako antoka fa tsy mikorontana amin'ny manodidina na inona na inona fa amin'ny sehatry ny fitsaboana dia manana fahalalana voafetra ihany ny – ny dokotera tao amin'ny ER na dia tsy mbola nandre izany.. Izy no fiainana eny fanohanana, fa niverina ho any amin'ny fampiasana.. huh
Foana aho nieritreritra momba ny fanomezana kratom ny try, satria aho mbola herôinina-mahadomelina nandritra ny taona vitsivitsy & izao aho amin'izao fotoana izao mba hanamaivanana ny methadone fanesorana soritr'aretina & hanajanona ny fampiasana intsony. Na izany aza, the.methadone ihany no mihazona ahy ho ambony indrindra ny 18 ora, lavitra kely noho ny Ataonareo ho, & Aho amin'ny 100mgs! Tena tsy mampino. Reraka aho ny maha “marary” isan'andro ary koa manana mitaiza indray & lohalika alahelo avy amin'ny fanatanjahan-tena naratra & lozam-piarakodia. Afaka olona masìna ianao, lazao amiko izay no tsara indrindra kofehy hifanaraka ny zavatra ilaina? Ahoana no fomba tokony hitondra azy & fa tena hoe ny voalohany? Ary koa ny hoe aiza no hividianana in NYC? Nisy olona dia mba ampio aho avy. Indrindra aho mankasitraka ny torohevitra. Misaotra anao.
kratom dia miasa ho ahy. Aho nitondra teny mafy 150mg andro oxy noho ny fanaintainana, fa reraka ny fandeferana azy. Aho amin'ny andro 5 tsy misy oxy sy naka 3 fatrany isaky ny andro 4 capsules isaky ny. Mbola mahazo ny WD soritr'aretina raha tsy handray ny kratom ara-potoana fa mahatsapa toy Izany dia midika hoe mahazo tsara kokoa isan'andro. Afaka milaza amim-pahatsorana aho raha tsy noho ny kratom dia efa nandainga ka nangalatra mba hahazo ireo pilina. Rehefa mitranga WD fa toy ny sainao dia manohitra anao, tetika fomba hahazoana izany pilina. Dia hanomboka fampidinana ny levitra ny K afaka andro vitsivitsy mba hahita izay mitranga, fa tahaka ny amin'izao fotoana izao, Tsapako fa tena be fanantenana rajako io no farany eny lamosiko. Misaotra an'Andriamanitra noho ny Kratom
Kratom no nanampy ny tonon-taolana sy ny marary andoha be! Angamba tsy ho an'ny rehetra, fa efa workwd fahagagana ho ahy. Izaho ihany koa mpisotro toaka sy fampahiratana nefa Izaho efa nampiasa Kratom, ny toaka fanirian'ny dia tsy misy,.
Efa naka fanaintainana ho an'ny mpamono olona manodidina 15 taona avy amin'ny norcs ny morphine ny Ir oxys sekoly sy ny antitra aza manaiky intsony oxys izay manao ary sux. Nianatra momba ny Kratom herinandro vitsivitsy lasa izay, ary maniry nianarako momba izany 10 taona maro lasa izay. Toa an'i Marijuana dia fahagagana fototra expecially ho an'ny olona toa ahy. Efa nitsahatra tamin'ny pks naka ny andro taorian'ny Kratom amin'ny aotra ny fahasembanana Ting detoxing. Afaka miasa torimaso sy mieritreritra tsy misy opiates voalohany Inona no toa toy ny fiainako. Aho, dia mampiasa izany ho an'ny hafa herinandro mivady ary miezaka wean eny. Raha izany toy ny kafeinina dia tsy misy olana. Forum ity Nanampy ahy iray taonina ka misaotra amin'ny torohevitra rehetra eto Manantena aho fa toy ny olona rehetra dia manampy ahy ny nanampy ahy.
Raha tsy noho ny kratom ny fanaintainako dia ho be loatra ny niteraka ary aho, dia tsy afaka miasa!! Izaho no naka opiates nandritra ny dimy taona ka nandringana ny fiainako!!! Kratom naveriny ahy!!! Hitandrina izany ara-dalàna! Aho izy ka saiky hamono ny tenako noho ny fanaintainana sy ny fampiasana opiate; kratom nisintona ahy niverina avy any amin'ny lavaka tsy hita noanoa! Misaotra an'i Jesosy noho io fahagagana io hazo!
Foana aho mampiasa kratom mba hitondra ny fanaintainana nandritra ny 2 taona izao. Hatramin'ny niverina aho fandidiana natao, Efa henjana aho sy ny fanaintainana, rehefa mivoaka am-pandriana. Mety hitohy mandritra ny andro raha toa ka tsy noho ny kapoaky ny kratom dite ataoko ho isa-maraina
Manana mitaiza fanaintainana amin'ny endrika mafy hozatra zavatra simba ao ny tongotro ary fa mararim-opiates! Afaka milaza amiko izay misy aretina ny mampiasa mba toy izany koa ny vokatry ny opiates noho ny fanaintainana sy ny fanahiana? Ary aiza no hividy azy? Tsy te-hahatsapa toy ny nisotro aho ny bunch ny kafe anefa. Mankasitraka aho misy torohevitra, Halako mandray pilina izany rehetra izany ary tiako ny fiainako indray!
I mampiasa kratom, White fihadiana Borneo karazana, voalohany indrindra ho toy ny uplifiting anti-depressant. I mampiasa azy isan'andro, ary somary mafy. Hoy izaho: kratom ny vokany dia toy ny fipoahana mahery ny tramadol. Misy milaza olona tatsy kratom dia tahaka ny hydrocodone – ary manaiky fa ny 20% ny ny vokany mitovy hydrocodone ho kely hatraiza – fa mafy ny fihetseham-po-fanandratako vokany amin'ny hery mifandray dia saika mitovy tanteraka ny vokatry tramadol.
Kratom Toa manana ambany indrindra mety ho ara-batana dependance. Miteny aho hoe satria afaka mandeha mandritra ny ora maro tsy misy izany (milaza, rehefa miasa aho mandritra ny ora maro ary tsy manana fahafahana miditra amin'ny ny famatsiana) ary tsy mahazo 'Marary.
Kratom ambanin'ny tany nanana ny freshest vokatra ary tena miahy ny mpanjifa!!!
Hey ry zalahy Te-hiala Norco; Efa mafy kapila olana amin'ny ambony indray, ary te zavatra voajanahary kokoa; Kratom vokatra izay tokony hahazo? I wouldnt mihevitra izay fanampiny angovo na. mba ampio.
Foana aho nandritra ny mampiasa Kratom 2 taona. Manana fototra ara-tsosialy ny fahaketrahana sy ny fanahiana. Izaho koa manaranaka tosidra ambony.
Kratom no nanampy alot miaraka amin'ny tebiteby ary ny fahaketrahana. Matahotra aho handray manohitra ny depressants, Fantatro ny olona izay mampiasa azy.
Ny zavatra lehibe indrindra Tiako momba Kratom no mitandrina ny tosidra eo amin'ny ara-pahasalamana isan-karazany.
Alohan'ny mahita Kratom, BP ny ho avy na aiza na aiza 140/90 ny 150/95. Izany no AMIN'NY BP levitra meds. Betsaka amin'ny Clonodine, Benicar, Lisiniprol, Cozaar, meds ireo dia tsy miasa ho ahy. Bad vokany ara-tsaina. Very Tapaka fihetseham-po. I intsony naka ireo meds.
5 levitra Kratom capsule, in-droa isan'andro, ny BP eo ho eo ny 116/68 ny 120/80. Efa nanana ny vakiteny 112/63. Salama tsara.
Efa nanandrana 5 karazany samihafa. Hatreto Bali Faratampony toa miasa tsara indrindra ho ahy. Tsy toy ny opiate, izany no tsy 'fara tampony’ Avy eo midina. Izany dia ela velona, Mbola mahatsapa izany 4-5 ora taty aoriana.
0 vokany raha tsy misy fitiavan-torimaso mampitafy. Tsy mahatsapa 'dope marary’ na ny faniriany.
Faly aho Kratom ara-dalàna ao amin'ny fanjakana. I mila izany amin'ny fitantanana ny tosidra ambony.
Nianatra momba ny Kratom taona maro lasa izay dia nampiasa azy io mba hiala amin'ny fiankinan-doha izany ny morphine nanao lehibe natao hanesorana ny fialana soritr'aretin'ny ny ankamaroany dia vao naka azy io intsony aho satria tsy mba tahaka ny tsiro tsara raha nanandrana wouldent manana fotsiny aho hita 100 grama ao amin'ny vata fampangatsiahana izay tsara ary koa ny fotoana fotsiny aho nanapaka rantsan-tanako, ary natahotra ny ho voasoratra pilina ary manomboka miteny ratsy indray fa noho stash efa ela teo aho :) Mety afaka mihitsy aho hanana fahazarana amin'ny torotoro, na vovo-ravinkazo fa afaka mahita ny olona iray mampiankin-doha miaraka amin'ny toetra voajanahary koa omen'ny afaka maka kely matetika anie no mba hahatsiaro sy carefull hanao ny fikarohana sy ny vintana tsara indrindra ho an'ny rehetra!
Kratom no nanolorana azy ho ahy momba ny herintaona lasa izay. Izany dia midika hoe efa lehibe vokatra mba hanampy amin'ny olana toy ny tsy fahampian'ny angovo, ambany toe-po, ary ny fanahiana ara-tsosialy. Betsaka ny dokotera sy ny fitiliana rehetra ireo olana. Manamarina tsara ny zava-drehetra avy, ka tsy misy izay fitsaboana mifandray. Efa nanandrana zava-mahadomelina levitra ho baomba ihany ny vokany ratsy izay ratsy noho ny aretina. Rehefa mandray Kratom, I hitanareo re ny safidy ivelan'ny salama kokoa izay toy ny tsy misy maniry ho kafe na toaka. Ary raha tsy tamin'ny Kratom manararaotra aho roa. Dia tena izany dia manampy.
Te hampitombo ny firaisana ara-nofo fiara, manampy ny mora tezitra, ary manana hery. Na iza na iza dia manana soso-kevitra ny amin'ny fomba tsara indrindra ho ahy ny mampiasa kratomite? Ve ny f cig asa tsara na mety ho tsara indrindra ny pilina? ?
izao no anana tsara sy tena tsara mahasolo ny opiates. I hitondra ny 3 grama ny vovo-ravina ary toa ny manao ny fitaka. Manantena aho fa tsy hatao nanararaotra ka lasa an-vaika teny toy izany dia afaka soa aman-tsara sy ara-dalàna foana. Noho izany ny toro-hevitra ny olona izay tia izany dia ny mitandrina azy ny tenanao sy ho tompon'andraikitra ary afaka manohy ny mankafy azy io soa aman-tsara.
Ny fanalahidin 'ny fampihenana kratom Hangover no efa hita… fandeferana hatrany ambany ny bisikileta sorisory ao! Mbola hampiasa ihany levitra (.7h) I nampiasa 2 taona maro lasa izay rehefa nanomboka ary izaho koa tsy mitsahatra manodidina 8 sorisory ao amin'ny tanana mba haka avy hatrany! No hangovers. Tia azy foana miparitaka kratom fanentanana :)